रिलायन्स फाइनान्सको चैत १ देखि सेयर लिलामीमा आउँदै, कहाँ जाने भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » रिलायन्स फाइनान्सको चैत १ देखि सेयर लिलामीमा आउँदै, कहाँ जाने भर्न ?
काठमाडौं - रिलायन्स फाइनान्सले कुल ६ लाख ५२ हजार ९४०.६० कित्ता सेयर लिलामीमा बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले संस्थापक समूहको ५ लाख ४२ हजार ३१४.५२ कित्ता र सर्वसाधारण समूहको १ लाख १० हजार ६२६.०८ कित्ता सेयर लिलामी गर्न लागेको हो । लिलामीमा चैत १ देखि चैत ८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । लिलामीमा न्यूनतम १०० रुपैयाँलाई आधार मानेर बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । लगानीकर्ताले सर्वसाधारणतर्फ न्यूनतम १०० कित्ता र संस्थापकतर्फ न्यूनतम १००० कित्तादेखि अधिकतम सबै सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।